OAU Student Portal Login www.eportal.oauife.edu.ng/login.php Vaovao farany: Vaovao an-tsekoly ankehitriny
OAU Student Portal Login www.eportal.oauife.edu.ng/login.php Fanavaozana farany
Filed in Vaovao momba ny sekoly by Editorial an'ny TMLT amin'ny 18 Jona 2021
OAU Student Portal Login: Ny fahefan'ny OAU dia nahafahan'ny vavahadin'ny mpianatra. Ary ity vavahadin-tserasera ity dia manome fampahalalana ho an'ny mpianatra ho avy rehetra momba ny fizotran'ny fidiran'ny andrimpanjakana.
Ary koa, amin'ity vavahady ity, ny mpianatra vaovao sy ny mpianatra miverina dia homena saika ny zavatra rehetra ilain'izy ireo hanamora ny fianarany sy ho tsara kokoa amin'ny andrimpanjakana.
Ny oniversite Obafemi Awolowo (OAU) dia fantatra amin'ny anarana hoe University of Ife. Ary izy dia governemanta federaly manana sy miasa oniversite nizeriana. Ary koa, ny oniversite dia ao amin'ny tanàna taloha Ile-Ife, Ny fanjakana Osun, Nizeria.
Ny oniversite dia natsangana tamin'ny 1961 ary ny kilasy dia nanomboka tamin'ny Oktobra 1962 ho University of Ife. Ary izany dia avy amin'ny governemanta isam-paritany Nizeriana Andrefana, notarihin'ny sefom-pokontany Samuel Ladoke Akintola. Nomena anarana oniversite Obafemi Awolowo tamin'ny 12 May 1987 izy io.
Na izany aza, nanome voninahitra an'i Chief ny fanovana anarana Obafemi Awolowo (1909–1987), praiminisitra voalohany an'ny Faritra Andrefana any Nizeria, izay nanana ny atidohany.
Login amin'ny Portal Student OAU
Ary koa, https://eportal.oauife.edu.ng/home.php
Topimaso momba ny fidiran'ny mpianatra OAU fidirana fidirana
Raha te hiditra na hiditra amin'ny vavahady fidirana OAU dia tsy maintsy fantatrao aloha izany.
Rohy vavahady fidirana OAU - www.lmera.oauife.edu.ng
Ny vavahady dia manome fidirana ho an'ny mpianatra vaovao, mpianatra miverina. Ny mpiasa (na ny mpampianatra mampianatra na ny tsy mpampianatra). Toy ny;
1. Hamarino / hiteraka RRR momba ny fandoavam-bola
Inona no dikan'ny RRR? RRR dia mijoro tsotra izao Fanovozan-kevitra momba ny famerenana Remita. Azonao atao ny manamarina mora sy haingana ny saran'ny fandoavam-bola Remita anao. Ary izany dia amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra RRR Link izay omena ao amin'ity vavahady ity.
Ity vavahady ity dia manampy anao hanamarina / hiteraka satan'ny fandoavam-bola Remita ho fanamarinana ny fandoavan-ketra OAU.
2. Fiverenana amin'ny fidiran'ny mpianatra / fidiran'ny mpianatra vaovao
Ny lahasa iray lehibe hafa dia ny fanomezana ireo mpianatra an'ity andrim-pianarana akademika lehibe ity, fidirana mivantana amin'ny dashboard -n'izy ireo. Na izany aza, ho an'ireo mpianatra izay tsy mahalala ny fomba na ny toerana hidirany amin'ny solaoro an-tserasera OAU, OAU no toerana tokony hisy anao
Ary koa, manome ny mpianatra rohy mora sy mivantana amin'ny fisoratana anarana ho an'ny mpianatra OAU Portal.
3. Ho an'ny fisoratana anarana amin'ny taranja Semester
Ny vavahadin-tserasera OAU dia manome ny mpianatra fidirana mora foana hisoratra anarana haingana ny fizaram-pianarany sy ny fisoratana anarana lehibe hafa.
Ary koa, amin'ity pejy ity, ianao dia homena rohy ho an'ny fisoratana anarana OAU Semester, anisan'izany ireto manaraka ireto voatanisa etsy ambany;
Ivotoerana fianarana OAU.
Ary koa, mpianatra voasoratra anarana ao amin'ny OAU.
Fanampin'izany, nekena ho mpianatra undergraduate.
Ankoatr'izay, ny OAU dia nanaiky mpianatra nahazo diplaoma.
Fanampin'izany, fisoratana anarana amin'ny fanadinana.
Ary koa, taranja voasoratra anarana OAU ho an'ny fanadinana.
4. Fampiharana amin'ny fidirana amin'ny OAU
Azonao atao izao ny mangataka ny hiditra ao amin'ny OAU amin'ny alàlan'ny vavahady OAU. Rehefa mangataka fidirana ianao dia homena ireto manaraka ireto:
Lisitry ny Programme OAU.
Ary koa ny lisitry ny foibem-pianarana OAU, izay ahitanao ny ivon-toerana akaiky anao.
Ankoatr'izay, torolàlana momba ny fomba fangatahana programa ho an'ny mpianatra.
Ary koa, ny torolàlana momba ny fandaharam-pianarana.
Fanampin'izay, ny fomba hijerena ID tsy manam-paharoa.
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny Portal Adiresy OAU
Ampidiro ny nomeraon'ny fisoratana anarana (Isa Matriculation) na ny ID an'ny mpiasa amin'ny maha UserId anao ao amin'ny pejy fidirana.
Ho an'ny mpianatra vaovao, ny fidirana voalohany dia mitaky anao hampiasa ny fisoratana anarana UME No (oh: 12345678ZZ) na tsia Fisoratana anarana mialoha ny diplaoma (oh: PDP05 / 9999) ho tenimiafinao. Manoro hevitra anao izahay hanova azy io amin'ny Password tadiavinao raha vantany vao mahomby ny fidirana voalohany.
Tena zava-dehibe izany amin'ny fiarovana ny kaontinao.
Ho an'ny mpianatra miverina, ny fidirana voalohany dia mitaky anao hampiasa ny daty nahaterahanao amin'ny endrika: DD / MM / YYYY ho tenimiafinao. Manoro hevitra anao izahay hanova azy io amin'ny Password tadiavinao raha vantany vao mahomby ny fidirana voalohany. Tena zava-dehibe izany amin'ny fiarovana ny kaontinao.
Dia tsindrio eo FANORENANA
Raha mahomby ny fidiranao dia hiseho miaraka amin'ny Passport Photograph (raha misy) ny anaranao. Raha anao ny sary dia amporisihina mafy ianao hanao tatitra amin'ny tompon'andraikitra amin'ny fidirana ho an'ny fanitsiana. dia tsindrio OKto proceed.
Hiseho ny lisitry ny asa azonao atao amin'ny maha mpianatra anao.
Tsindrio ny iray amin'ireo lahasa raha ilaina.
Rehefa vita dia kitiho ny SIGN OUT hanakatonana ny fotoam-pianaranao hisorohana ny fisandohana ny kaontinao.
Raha tsy manana CARD IDENTITY ao amin'ny Oniversite ianao dia mitaterà ao amin'ny Ivotoerana Computer hanodinana azy eo noho eo.
Raha mila torolàlana misimisy kokoa, kitiho eto
Tsindrio OK eto ambany raha hitondra anao any amin'ny LOGIN PAGE
Mariho tsara fa FAMONJENA FOMBA FAMPIANARANA dia misy ao anatin'ny kaontinao manokana.
Ahoana ny fomba fangatahako amin'ny fidiran'ny mpianatra
Portal amin'ny oniversite Madonna
Portal ho an'ny mpianatra LASU
Vatsim-pianarana amin'ny oniversite Havard
Portal University Oye Ekiti Portal
Inona no hatao rehefa eo amin'ny Portal Admission OAU
Ampidiro ny sarin'ny mpianatra
Miteraha kaody remita ihany koa handoavana ny saram-pianarana semester OAU ary hanoratanao lisitra / fanadinana
Ankoatr'izay, manonta kara-panondro mpianatra OAU
Ho fanampin'izany, pirinty ireo lisitra fisoratana anarana / fanadinana fanadinana
Ento ao koa ny taratasy mivalona eo amin'ny ivom-pianaranao
Ho fanampin'izay, ampidino ny fandaharam-potoana OAU e-Exam / Pen-on-taratasy
Avereno indray, manomboka mandefa TMA nampakatra
Ataovy miaraka ny tenanao ary hahita anao ao amin'ny efitrano fanadinana
Na izany aza, miaraha mitolona amin'ny alàlan'ny fizarana ity lahatsoratra ity amin'ny hafa. Ary, raha manana fihetseham-po sy fanontaniana momba izany ianao Portalan'ny mpianatra OAU midira, azafady atsipazo eto ambany azafady. Hovaliantsika haingana araka izay azo atao izany.
Fanavaozana OAU momba ny areti-mandringana COVID-19 ho an'ny mpiasa sy ny mpianatra
COVID-19: Ny OAU dia manomboka manentana sy mizara ireo fitaovana fanampiana
OAU Fandoavam-bola momba ny fandoavam-bola ho an'ny mpianatra vaovao 2019/2020
Ny saram-pianarana ambaratonga faharoa OAU 2019/2020 ho an'ny mpianatra vaovao sy miverina
Fandraisana mpiasa ao amin'ny oniversite Obafemi Awolowo 2018 sy ny fomba fangatahana asa tsy misy
Fandraisana mpiasa ao amin'ny oniversite Obafemi Awolowo 2017 | Ahoana ny fomba fangatahana fandraisana mpiasa amin'ny University of Obafemi Awolowo (OAU)
Fandraisana mpiasa tsy miankina amin'ny anjerimanontolo Obafemi Awolowo 2017 | Fampiharana sy fitakiana fampiharana
Tags: maha-zava-dehibe ny fidiran'ny vavahadin'ny mpianatra oau, oau fidirana vavahadin'ny mpianatra, Obafemi Awolowo University, topimaso momba ny fidiran'ny vavahadin'ny mpianatra oau hahazoana fidirana
« Fenix ​​International Recruitment 2021/2022 Application Formal Portal
Fenix ​​International Job Portal 2021 www.fenixintl.com »
Torohevitra hanatsarana ny fahaizanao matematika
Jolay 2021 Fetin'ny tsingerintaona nahaterahana mahafatifaty rahavavy sakaiza sy hafatra handohazana azy ireo
valiny www.nouonline.net: National Open University Result Checker 2021
Jolay 2021 Maniry firarian-tsoa maraina handefa hafatra handefasana manomboka ny andronao
Portal momba ny fangatahana banky Standard Chartered 2021/2022
Portalan'ny fandraisana mpiasa Standard Chartered Bank Nigeria 2021 www.sc.com
Fampidirana ny programa momba ny sakafo eran-tany an'ny Firenena Mikambana 2021/2022
Portalin'ny fandaharana momba ny sakafo eran-tany an'ny Firenena Mikambana 2021 www1.wfp.org
Fanoloran-kevitry ny Governemanta Kolombiana & PhD 2021/2022 Vaovao farany
Vanier Canada vatsim-pianarana nahazo diplaoma 2021 ho an'ny mpianatra nahazo diplaoma
Vatsim-pianarana manerantany momba ny fahombiazana amin'ny University of Exeter 2021
Eo amin'ny habakabaka izao i Jeff Bezos? avy any Amazon ka hatrany NASA
Ampiharo izao Ho an'ny fanavaozana ny ExxonMobil nahazo diplaoma 2021
Jolay 2021 Maniry, hafatra ary teny nalaina tamin'ny tsingerintaona nahaterahana
ExxonMobil Recruitment 2021/2022 Jereo ny fanavaozana ny fampidinana ny application
ExxonMobil Nigeria Recruitment 2021/2022 Vaovao farany fanavaozana
ExxonMobil Portal Recruitment Portgraduate 2021 www.corporation.exxonmobil.com
Vaovao farany momba ny fandraisana mpiasa nataon'ny polisy nizeriana 2021 Fampivoarana ireo asa momba ny asa
DPR fandraisana mpiasa www.dpr.gov.ng 2021/2022 Fampiharana taratasy fangatahana